HomeXaraashyadaBULSHADA BULSHADAÇerkezköy-Halkalı Mashruuca Jid-gaabinta iyo Mashruuca Isgaarsiinta
15 / 11 / 2018 BULSHADA BULSHADA, Xaraashyada, GUUD
Qiimaha xadka ee 2018 / 481585 GCC ee Agaasinka Guud ee Waddooyinka Tareenka ee Waddanka Turkiga (TCDD) waa 24.308.165,32 TL oo qiyaasta qiyaasta ayaa ah 30.056.595,48 TL. Çerkezköy-Halkalı Shirkadda 5 waxay soo gudbisay qandaraaska hindisada mashruuca diritaanka iyo isgaarsiinta oo ay weheliso qaybta wadada ee qaybta khadka waxayna soo gudbisay hindisada iyadoo la socota qandaraaska 31.279.110,13 TL. IYO INDHAHA. Inc. shirkadda ayaa guuleysatay.
dalab Çerkezköy(Reeban) -Halkalı81 km ilaa qadka (laga reebo), isgaarsiinta tareenka iyo howlaha mashruuca dhismaha isgaarsiinta. Muddada shaqadu waa 450 (afar boqol iyo konton) maalmood oo taariikhi ah laga soo bilaabo taariikhda la keenay.